Tun Tun's Photo Diary: April 2015
Langkawi Trip, Dayang Bunting Marble Geoforest Park #4
15-Aug-2012, Langkawi ခရီးစဉ်ရဲ. ဒုတိယနေ.အတွက်ကတော့ Island hopping Day Tour Package ကို ၀ယ်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ Langkawi က Phuket လို Island hopping Tour တွေ ရွေးစရာ သိပ်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဟိုတယ်က စီစဉ်ပေးတဲ့ Tour ကိုပဲ ၀ယ်လိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက်ပေးရသလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဈေးကတော့ သိပ်မများပါဘူး။ သူက Phuket က Tour တွေလို တစ်နေကုန်မဟုတ်ပဲ၊ မနက်မှာ ၉နာရီလောက်ကစသွားပြီး နေ.လည်ပိုင်း ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ ပြီးသွားပါတယ်။
at 4/25/2015 02:48:00 AM Links to this post 1 comment:
Labels: Animal, Langkawi, Malaysia
Langkawi Trip, Black Sand Beach #3
14-Aug-2012, Langkawi Underwater world ကို အမြန်ဝင်လည်ပြီး Black sand beach ကို သွားပါတယ်။ Beach ဆိုလို. မြန်မာပြည်ကဆို ချောင်းသာ တခုပဲ ရောက်ပါတယ်။ ထိုင်း၊ စင်ကာပူက ကမ်းခြေတွေတော့ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သဲအမဲ ရောင် ကမ်းခြေကိုတော့ တခါမှ မရောက်ဖူးပါဘူး။
at 4/18/2015 04:46:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Landscape, Malay Food, Malaysia, Street
Toa Payoh Water Festival 2015, Singapore
2015-Apr-12 နေ.က Toa Payoh ဘုန်းကြီးကျေင်း သင်္ကြန်ကို မနက် ၁၀နာရီလောက် ရောက်သွားတယ်။ Toa Payoh ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မရောက်ဖြစ်တာ ၃နှစ်လောက် ရှိတော့မယ်ထင်တယ်။ Toa Payoh သင်္ကြန်ကို နောက်ဆုံး ရောက်ဖူးတဲ့ နှစ်က ၂၀၀၆ သင်္ကြန်တုန်းကပါ။ တော်တော်လေး ကို ကြာပြီ ဆိုပါတော့။
at 4/13/2015 10:48:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Food, Myanmar Food, Singapore, Thingyan
Sembawang Water Festival 2015, Singapore
2015-Apr-05, စင်ကာပူမှာ သင်္ကြန်ပွဲ ကို Sembawang ဘက်နားမှာ လုပ်ခဲ့တယ်။ ပွဲလုပ်တဲ့နေရာက MRT နဲ. မနီးတော့ Shuttle Bus တွေပါ စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်တို. သူငယ်ချင်းအဖွဲ.က လက်ဖက်သုတ် စတုဒီတာကျွေးပါတယ်။
at 4/08/2015 07:44:00 AM Links to this post4comments:
Labels: Event, Food, Myanmar Food, Singapore, Thingyan
Langkawi Trip, Dayang Bunting Marble Geoforest Par...